Yini ongayibona eLa Gomera, enye yezindawo ezinhle kakhulu phakathi kweCanary Islands | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 11/10/2021 12:33 | España, Iziqhingi
Yini ongayibona eLa Gomera ngumbuzo abantu abaningi abalungiselela ukuya kulesi siqhingi saseCanarian abazibuza wona. Kunengqondo, ngoba ingenye yezindawo ezingaziwa kakhulu ngalezi ziqhingi zaseSpain futhi, empeleni, zivakashelwe kancane kuneTenerife (lapha sikushiya i-athikili ekhuluma ngeTenerifenoma uGran Canaria.
ILa Gomera, nokho, igcwala ubuhle kuyo yonke indawo. Kumenyezelwe Indawo Yemvelo Yezinto Eziphilayo ku-2012, ikunikeza amapaki emvelo, amadolobha amancane agcwele ubuhle futhi anezikhumbuzo ezithakazelisayo, amabhishi amahle kanye nobunye obufana nempempe eyaziwayo yenjoloba. Lesi sakamuva siyindlela yokuxhumana yokhokho eyayivele isetshenziswa ngabomdabu bakulesi siqhingi futhi lokho sekumenyezelwe Amagugu Emhlaba. Uma uzibuza ongakubona eLa Gomera, sikumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Yini ongayivakashela eLa Gomera: ukusuka eGarajonay kuya eSan Sebastián enhle
1.1 Ipaki kazwelonke yeGarajonay
1.2 Ezinye izikhumbuzo zemvelo ongazibona eLa Gomera
1.3 Amabhishi amahle kakhulu eLa Gomera
1.4 I-Alajeró, phakathi kwezintaba ezinkulu
1.6 IVallehermoso, umasipala omkhulu kunayo yonke eLa Gomera
1.7 IGreat King Valley
Yini ongayivakashela eLa Gomera: ukusuka eGarajonay kuya eSan Sebastián enhle
Sizoqala ukuvakasha kwethu kulesi siQhingi saseCanary sivakashele izimangaliso zemvelo ezifana neGarajonay National Park ukuqhubeka nokubona izindawo ezimangazayo futhi siqede eSan Sebastián de la Gomera, inhlokodolobha yesiqhingi.
Ipaki kazwelonke yeGarajonay
Ipaki yemvelo yaseGarajonay
Lesi simangaliso semvelo sithatha ngaphezu kwe-10% yesiqhingi futhi sitholakala engxenyeni yaso emaphakathi. Lesi siqiwi sithola igama laso engqungqutheleni ebusayo kuso, iGarajonay, okungamamitha acishe abe ngu-XNUMX ukuphakama, okuyindawo ephakeme kakhulu eLa Gomera.
Kumenyezelwe Amagugu Emhlaba, lesi sikhala semvelo siqukethe ikakhulukazi amahlathi e-laurel, ezibhekwa njengensalela yangempela yemvelo. Ziyinto ejwayelekile yesikhathi semfundo ephakeme futhi zigcine zinyamalale cishe yonke indawo. Zenziwe ngama-fayas, heather, ferns nama-laurels, ikakhulukazi.
Indlela enhle yokwazi leli paki ukuhamba ngezinyawo. Unezindlela eziningi ezimakwe kahle ezihamba ngayo. Ngaphezu kwalokho, ngaphakathi kwakho unendawo yokuzilibazisa ye- IBig Lagoon futhi endaweni ebizwa Umdlalo wamabhola, kaMasipala wase Inaliti, uzothola isikhungo sezivakashi.
Ezinye izikhumbuzo zemvelo ongazibona eLa Gomera
Kodwa-ke, iGarajonay akuyona ukuphela kokuheha kwemvelo kulesi siqhingi saseCanarian. Ngasenyakatho yi Ipaki yemvelo yaseMajona, lapho ukuguguleka komhlaba kudale khona imihosha emikhulu futhi kunezinhlobo zezinto eziphilayo ezikhona.
Izikhumbuzo zemvelo ezifana nalezo ze- URoque Blanco, kusuka Ukuhamba kukaCarretón noma of ILa Caldera. Lesi sakamuva siyisigaxa sentaba-mlilo esigcinwe kahle kunazo zonke kulesi siqhingi. Kepha, mhlawumbe, okukukhanga kakhulu yilokho Izitho, abanye bobunjwa eweni abakhiqiza amashubhu ale nsimbi.
Ngamafuphi, bekungeke kwenzeke ukukutshela ngazo zonke izimangaliso zemvelo ozibona eLa Gomera. Kepha sizokhuluma nangezindawo zemvelo zokulondolozwa kwemvelo zasePuntallana naseBenchijigua, indawo evikelekile yase-Orone, izindawo ezithakaselwa yisayensi zamaCliffs ase-Alajeró naseCharco del Conde, kanye nepaki yasemaphandleni iValle Gran Rey, enamawa ayo nemihosha embozwe amasimu.
Amabhishi amahle kakhulu eLa Gomera
Ibhishi laseLa Calera namawa eLa Mérica
Asikwazi ukukutshela ukuthi yini ongayibona eLa Gomera ngaphandle kokuma emabhishi ayo amahle. Zonke zinezihlabathi ezimnyama, kepha lokhu akuzenzi zibe zinhle kakhulu noma zinconyelwe indlu yokugezela. Eqinisweni, lesi siqhingi sinokunye kokuhle kakhulu kumaCanaries (lapha sikushiya i-athikili emayelana namabhishi eziqhingi).
Enyakatho yesiqhingi unebhishi le- La Caleta eHermigua. Kungamamitha angamakhulu amabili kuphela esihlabathi sentaba-mlilo, kepha lokho kuyinika ukuthandeka okungaphezulu. Ngaphezu kwalokho, ivikelekile kumagagasi, okwenza ikulungele ukubhukuda. Kusondele kakhulu ibhishi lase USanta Catalina, nokho ephelele emidlalweni yasolwandle efana nokuntweza phezu kwamanzi, yize futhi inechibi elihle lemvelo. Kepha, uma sikhuluma ngalezi zinhlobo zezindawo, ezingcono kakhulu yilezo ze- Ipaki yasolwandle iVallehermoso.
Ngokuqondene naseningizimu yeLa Gomera, sincoma amabhishi ase- La Calera futhi i inglés eValle Gran Rey. Owokuqala wabo ulungele ukuthi uhambe nezingane ngenxa yamagagasi ayo aphansi, kanti owesibili uthathwa njengongcono kunabo bonke esiqhingini. Itholakala phansi kwewa elibabazekayo futhi igcina umoya wayo oyintombi. Ngakolunye uhlangothi, e-Alajeró unolwandle lwase Santiago, ekahle ngokuntywila ngenxa yengcebo yayo yokufuya izinhlanzi, naseSan Sebastián de La Gomera uzothola lokho kwedolobha uqobo, lelo La Guancha kanye nokuthi Umgede, lesi sakamuva sibonakala etsheni lesikhumbuzo lesibani sika-Olimpiki.
ILa Guancha ilibhishi lama-nudist impela, kepha akulona lodwa esiqhingini. Kukhona nezinye zeTapahuga, Chinguarime, Argaga, El Guincho, El Cabrito ne-las Arenas, phakathi kwabanye.
I-Alajeró, phakathi kwezintaba ezinkulu
Ngemuva kokuvakashela ingxenye enhle yesimo seCanary Island, sizovakashela amanye amadolobha aso, abalulekile maqondana nalokho okumele sikubone eLa Gomera. Sizoqala nge-Alajeró, etholakala phakathi kwezintaba ezinkulu (empeleni, ithatha indawo yepaki yaseGarajonay), kepha ngokungena olwandle ngamawa amangalisayo.
I-Alajeró ukuvakasha okucishe kube yisibopho, ngoba esikhathini sikamasipala waso yi Isikhumulo sezindiza saseLa Gomera. Kodwa-ke, futhi ungabona endaweni okuhle Isonto lase-El Salvador, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX kanye IHermitage ka-Lady Wethu iNcasakazi ka-El Paso, umphathi wedolobha.
Ukubukwa kweHermigua, elinye lamadolobha azobonwa eLa Gomera
Kutholakala enyakatho yesiqhingi, leli dolobha liyikhaya le- I-Ethnographic Museum yaseLa Gomera, ukuvakashelwa okubalulekile uma ufuna ukwazi amasiko esiqhingi futhi lokho kugcwaliswa yipaki laseLos Telares. Futhi, ungabona ifayela le- Isigodlo seSanto Domingo de Guzmán, yakhiwa ngo-1598; i-hermitage yeSan Juan nesonto le-Incarnation, ithempeli elihle elihlanganisa izitayela ze-neo-Gothic neo-Byzantine.
Kepha uphawu olukhulu lweHermigua yi URoques de Pedro noPetra, izintaba-mlilo ezimbili ezibabazekayo ezinenganekwane yazo. Ngokusho kwalokhu, babeyizithandani ezimbili ezaphendulwa ngamatshe ngombani.
IVallehermoso, umasipala omkhulu kunayo yonke eLa Gomera
Kuvikelwe ngokubabazekayo RI-oque Cano, idolobha laseVallehermoso futhi linetshe lesikhumbuzo semvelo laseLos Órganos, esesikutshele ngalo kakade. Kepha ukuvakasha kwakho emzaneni kumele kuqale ngobuhle bawo UMthethosisekelo Plaza, yenganyelwe nguMkhandlu Wedolobha ngebhalkoni yawo enesitayela seCanarian futhi igcwele imigoqo.
Futhi, kufanele ubone ifayela le- Isonto laseSan Juan Bautista, ithempeli le-neo-gothic lekhulu le-XIX; ingadi ebabazekayo ye-Discovery, enezinhlobo ezivela emhlabeni wonke nezinsalela zeCastillo del Mar.Lokhu okwakuyingxenye yetheku lokulayisha elakhiwe ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX lokuthunyelwa kwamabhanana kwamanye amazwe, okukhona kuwo futhi okuthiwa yiVallehermoso davit.
IGreat King Valley
Itholakala phansi kwezintaba ezinhle lapho odumile impempe yenjoloba, IValle Gran Rey ikunikeza itheku elihle lokudoba nezemidlalo. Kepha ungabona futhi kuleli dolobha i- impumela yamaKhosi Angcwele, eyakhiwa ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX, kanye ne- Umbono wePalmarejo, eyenziwe ngumculi waseLanzarote uCésar Manrique futhi ekunikeza ukubukwa okumangazayo kwalesi sigodi esihle.
Akuyona yodwa ongayithola endaweni. Eqinisweni, iLa Gomera iyisiqhingi semibono yokubuka. Sincoma futhi iSanto, Curva del Queso neLa Retama. Ekugcineni, ngeSonto lesibili lenyanga ngayinye unemakethe yobuciko edolobheni.
Siphothula ukuvakasha kwethu kulesi siqhingi enhlokodolobha yaso enhle. ISan Sebastián de la Gomera yidolobha elincane elinabantu abayizinkulungwane eziyishumi elingenalutho eligcwele ubuhle. Sivele sikutshele ngamabhishi alo amahle, kepha futhi inezinombolo eziningi zezikhumbuzo.
Ngaphezu kwalokho, singakutshela ukuthi yena uqobo, esewonke, mkhulu kakhulu. Unyathelwa egqumeni elisogwini futhi ugcwele imigwaqo nezindlu ezijwayelekile zaseCanarian. Kepha sikucebisa ukuthi uvakashele i- Isonto le-Our Lady of the Assumption, okuvela kuye ngekhulu le-XNUMX, yize, ngenxa yokuhlaselwa ngabaphangi, kuye kwadingeka ukuthi yakhiwe kaningana. Kunoma ikuphi, ihlanganisa izitayela zeGothic, Mudejar neBaroque. Ngaphezu kwalokho, ngaphakathi unamafresco amahle.
Ngesikhathi esifanayo kungokwalapho i- I-Count's Tower, kubhekwe uphawu lweLa Gomera. Yakhiwe ngamatshe amhlophe futhi abomvu, kwakuyindawo yokuzivikela eyasetshenziswa kamuva njengendawo yokwamukela abantu. Njengamanje, inombukiso we-cartographic walesi siqhingi.
Kufanele futhi uvakashele i- IColumbus House, isakhiwo sekhulu le-XNUMX. Lithola leli gama ngoba indlu eyayikule ndawo ngaphambilini yayisetshenziswa itilosi njengendawo yokuhlala ngaphambi kokuya eMelika. Namuhla likhaya kumnyuziyamu omuhle wobuciko bangaphambi kweColombia.
Ngakolunye uhlangothi, isizinda seSan Sebastián Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi inesithombe sosanta osinika igama layo nokuthi ngubani ongcwele waseLa Gomera. Kepha okuhle kakhulu yi- Indlu Yomthombo Wase-Aguada noma Amasiko. Kuthiwa uColumbus uphuze amanzi abusise ngawo iZwekazi Elisha. Igqame ngesitayela sayo sendabuko saseCanarian futhi njengamanje inemnyuziyamu enikezelwe ngokunembile ekuhambeni komphathi wamasosha.
IPlaza de América, eSan Sebastián de La Gomera
Eziningi zalezi zikhumbuzo zise- umgwaqo wangempela, ebaluleke kakhulu eSan Sebastián de la Gomera. Ihamba ngezinyawo futhi igcwele izitolo, imigoqo nezindawo zokudlela. Kepha, ngaphezu kwakho konke, yakhelwe izindlu eziningi ezijwayelekile zaseCanarian ezifana neLos Quilla, iLos Condes noma iCasa Darias.
Ekugcineni, esakhiweni sekhulu le-XNUMX une Isikhungo Sokuvubukula saseLa Gomera, enokuvuselelwa kabusha kwama-altare aseGuanche nezinye izinto zesiko labomdabu lesi siqhingi.
Sengiphetha, sibuyekeze nathi konke ongakubona eLa Gomera. Njengoba uzobona, kuyisiqhingi esihle lapho uzokujabulela ukubukeka okuhle kwemvelo, amabhishi athule kanye nefa elimnandi kakhulu. Manje kufanele nje uzikhuthaze ukuthi uyivakashele futhi usitshele ukuthi uyisebenzise kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqhingi » Yini ongayibona eLa Gomera